FAQ - BENFA TECHNOLOGY CO, LTD.
Kungani singase ngokwezifiso umshini ukunitha ukunikeza amasampuli?
phambili wekhasimende engacacile ukuklama ukuphambuka
Ezinye amakhasimende musa ngokucacile ezitatimendeni yabo. Ezinye izingxenye anamagama ahlukene futhi ukuqonda kusukela umkhakha. Lokhu kungaholela ngeziphambeko umklamo siko imishini ukunitha. Uma kukhona namasampula omkhiqizo, ukubambezeleka kubangelwa ukukhulumisana akukuhle zingancishiswa.
ukwahlulelwa mkhiqizo ngqo ngaphezulu
Eminye imikhiqizo, ngenxa inqubo isakhiwo sabo esiyingqayizivele, kungenzeka ukuthi baxhumane ngumkhiqizi ngaphambili. Ngisho uma lokhu kubekwe ngendlela ecacile, ngeke bakwazi ukuqonda ngokushesha ukuthi umkhiqizo onjani bakuphi. Uma anganikeza namasampula omkhiqizo, bakwazi ukuhlaziya kangcono umkhiqizo. inqubo yokwenza igobolondo, design ngokwezifiso;
ukuqhathanisa elula, isampula
Ukuze imikhiqizo inkambiso, isampula ukuqhathanisa kuyadingeka. Endabeni amasampula, umenzi kusheshe uqinisekise ukuthi izingxenye uthenge nezidingo, nokuthi imikhiqizo ekhiqizwa ukuhlangabezana nezidingo;
Ukuze amakhasimende ngezifiso imishini ukwaluka, kungcono ukunikeza amasampula ukuthi umenzi kudingeka ukukhiqiza. Uma kungekho amasampula, ukunikeza imidwebo umkhiqizo ukunciphisa isithiyo ukuxhumana phakathi kwala maqembu womabili, futhi ake umshini ukwaluka abakhiqizi ukukhiqiza the best quality ukwaluka imishini.
Ithonya Inombolo ngiluka abathwali Umshini Quality Product
Isibalo abathwali for ukwaluka imishini ngesivinini ucishe. Ngisho noma singaphili ngiluka umkhiqizo ofanayo, inani ukwaluka umshini nokwakha uthi lokuphotha esetshenziswa ingase futhi ibe khona ehlukile. Inani abathwali ngeke kungithinte yinkimbinkimbi isakhiwo umshini ukwaluka kanye nobunzima ngiluka umkhiqizo. Ngokuvamile, aba maningi inombolo yenethiwekhi, ayanda intengo umshini ukwaluka kanye eqonde kakhulu imikhiqizo ukwaluka zingenziwa. Isibalo imishini ukwaluka ikhasimende ukhetha incike izimfuneko ukubukeka nokusebenza umkhiqizo aluka. Ngokwesibonelo, aluka hoses nazo kusetshenziswa umshini wire ukwaluka. imishini ukwaluka ngenombolo enkulu abathwali uqiniseka ukukhiqiza kwamagoda zikanokusho futhi amandla kangcono compressive. Ngesikhathi esifanayo, izindleko zizoba ephakeme. Ngoba bonke imishini ihlanganisa, inani yenethiwekhi kuyinto ebalulekile ebhekisela ikhwalithi kwekusebenta kwato. Isibalo ukwelukwa umshini nokwakha uthi lokuphotha okwamanje ezivezwa Benfair Technology zokhahlamba kusuka njalo 24, uthi lokuphotha 36 eziyinkimbinkimbi 72.120 nokwakha uthi lokuphotha. Uhlobo umshini ukwaluka ekhiqizwa incike izidingo yekhasimende.
Ikheli: CHA 20 WUFENG ROAD XINCHANG COUNTY, Zhejiang, China 312500
Ifoni: Sishayele manje: 0575-86220518
Ifeksi: Sishayele manje: 0575-86280280
Joyina amabutho nabanamandla, o ukukhetha ...
Ngenxa ibhizinisi okujwayelekile abahlelela amaShayina hose ukwaluka umkhakha, Benfair Technology iye njalo walondoloza indinganiso ephakeme nezimfuneko esiqinile ngokwa futhi kusukela ngalesosikhathi iye yaqhubeka silondoloze ulaka yayo. I ...
Idatha ukugqashuka ukwenza lokhu braidi ...
Lo mshini ukwaluka bekulokhu ethandwa kakhulu emakethe futhi ngothando eyaziwa njenge "Xinchang braider". Ukuthola lokhu idumela nolimi ukwenyuka kwezinga bahambisane nale nqubo ma ...